Izimpahla ze-Kithcen - i-Ningbo Sellers Union Imp & Exp Co., Ltd.
Impahla Yekhishi Isitolo esidayisa yonke impahla
I-Sellersunion ihola i- ejenti yokuthola ulwazi e-Yiwu China, ngaphezu kwabasebenzi abangu-1200, inendawo yokugcina impahla engama-20000m² ne-10000m² showroom. Kule minyaka engu-23 edlule, sisungule ukubambisana ezinzile 10,000+ quality izimboni. Kuphakwe isitolo esingu-1500 +, isitolo esidayisa yonke impahla, umthengisi, njll.
Sinikezela ngezinsiza eziningi zasekhishini, kusuka ezitsheni zokupheka kuya ekugcineni kwekhishi, njll. Ungasithumela nezithombe zemikhiqizo oyidingayo noma usitshele umbono wakho wokuthola ulwazi, sizohlangabezana nazo zonke izidingo zakho. Ithimba lethu lokuklama lingaphinde linikeze noma yikuphi ukwakheka okuyimfihlo noma ubuciko, okukuvumela ukuthi ube nemikhiqizo yelebula yangasese kalula.
Ummeli we-Yiwu omuhle kakhulu
Igumbi lethu lombukiso elikhulu kunawo wonke ku-inthanethi
Imikhiqizo engaphezulu kuka-500,000 eku-inthanethi nabahlinzeki abangu-18,000.
Ngesevisi yethu yokumisa umsebenzi eyodwa, Ungangenisa imikhiqizo evela eChina kalula.
Buka Omunye Umkhiqizo Omusha
Isitoreji Sokudla Catelog
Isitoreji Sekhishi Catelog
Izinsiza Zokuhlanza I-Catelog
Ikhishi lamagajethi wekhishi
Imbiza Yokupheka I-Catelog
Ama-Baking Sheets Catelog
Izitsha Zokupheka I-Catelog
Izesekeli Zokubhaka I-Catelog
Ngabe ufuna ukuthola izinto eziningi zasekhishini ezinoveli? Xhumana nathi manje, ungangenisa kalula izinto zasekhishini zenoveli ezivela eChina. Sinezixazululo ezahlukahlukene, singahlangabezana nezidingo zezinhlobo ezahlukahlukene zamakhasimende.
Ngoba sijwayelene nayo yonke imakethe yaseChina, futhi ungathengisa ezinye izidingo zansuku zonke ngathi, njengemikhiqizo yasendlini, amathoyizi, izipho, izinto ezifuywayo, njll.
Thola i-Yiwu Agent Service